चीनबाट रेल ल्याउने फाइल बेपत्ता ! नेपाल र चीन दुवै अन्योलमा - info4nepal
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समृद्ध नेपालका सपना छिमेकीसँग नेपालको रेमार्ग जोड्नु हो ।
त्यसैले चुनावी घोषणापत्रमासमेत ओलीले केरुङ-काठमाडौं, काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनीको कुरा उल्लेख गरेका छन् । तर, दुर्भाग्य उक्त मार्ग निर्माणको लागि चिनियाँ टोली विगत तीन महिनादेखि नेपाल सरकारको एउटा पत्रको प्रतिक्षामा छ । तर, नेपालले उक्त पत्र पठाउने फाइल नै बेपत्ता भएपछि नेपाल र चीन दुवैतिर अन्योलता छ ।
२०७४ कार्तिको तेस्रोसाता चिनियाँ रेलवे प्रशासनका उपमन्त्री चेङच चियन नेतृत्वको २३ सदस्यीय टोलीले केरुङ-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणवारे सम्भाव्यता अधययन ठाँउको प्रतिबेदन दिएर प्रक्रियपछि नेपालले कागजी प्रक्रियासमेत अघि बढाउन नसक्दा तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि उक्त रेलमार्ग अलपत्र अबस्थामा छ ।
यस्तो अबस्थामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको चीन भ्रमण भएको छ । चिनियाँ पक्षले रेलमार्गको विषयमा प्रश्न गरे परराष्ट्रमन्त्रील ज्ञवालीले के जवाफ देलान ? यो समाचार दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
ओलि ज्यु बिर्सिनुभो कि के , ‘तपाई देशको प्रधानमन्त्री पो त !’
गुरुङ्गकि श्रीमती , छोराको बिचल्ली सबैले एकपटक शेयर गर्नुहोला